လက်ဗီးယားမှ ဈေးဝယ်စင်တာကြီးတစ်ခု၏ အမိုးပြိုကျ၍ လူပေါင်း ဒါဇင်နှင့်ချီကာ သေဆုံး
လက်ဗီးယားနိုင်ငံ မြို့တော် ရီဂါမှ မက်ဆီမာအမည်ရှိ ဈေးဝယ်စင်တာကြီးတစ်ခုမှ အမိုးပြိုကျခဲ့သဖြင့် လူပေါင်း ၄၅ဦးသေဆုံးပြီး ဒါဇင်နှင့်ချီသော လူများ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၁ရက် ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ၆နာရီခန့်က အမိုးပြိုကျချိန်တွင် ဈေးဝယ်သူ အများအပြားနှင့် စည်ကားနေသည့် အချိန်ဖြစ်သည်။
အလုပ်မှ အ်ိမ်ပြန်လာသူများ ဈေးဝယ်လေ့ရှိသည့် အချိန်ဖြစ်၍ ယခုကဲ့သို့ အဖိတ်အဆင် များရခြင်းဖြစ်သည်။
ပြိုကျသည့် အမိုးပျက်အောက်တွင် ပိတ်မိနေသော သူများလည်း ရှိနေသေးသည်။ အရေအတွက် မည်မျှ ပိတ်မိနေသည်ကို မသိရသော်လည်း ပိတ်မိသူများနှင့် ပတ်သတ်သူ ၂၅ဦးကမူ အပျက်အစီးနားတွင် စောင့်နေကြသဖြင့် အမိုးပိနေသူပေါင်းမှာ ၂၅ဦးနှင့် အထက်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။
မက်ဆီမာမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ၀န်ထမ်းငါးဦး ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီး နှစ်ဦးကို ဆေးရုံတင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ကျန်သုံးဦးမှာ ပျောက်ဆုံးနေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ရဲများက ယခုဖြစ်ရပ်အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
ဒေသတွင်းမီဒီယာများကမူ အလုပ်သမားများသည် ဈေးဝယ်စင်တာ ခေါင်မိုးပေါ်တွင် ဥယျာဉ်တစ်ခု တည်ဆောက်နေ ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
မက်ဆီတာ စင်တာသည် မီတာ၅၀၀ ပတ်လည် အကျယ်ရှိပြီး ၂၀၁၁ခုနှစ်က စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် ပိသုကာဆုပင် ရခဲ့သော အဆောက်အဦဖြစ်သည်။
ဥရောပတိုက်၏ အရှေ့မြောက်ဖျားတွင် ရှိသော လက်ဗီယားနိုင်ငံသည် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း မြင့်လျှင်မြန်စွာ မြင့်တတ်ခဲ့ပြီး လာမည့်နှစ်တွင် ဥရောပဇုံထဲတွင် ပါဝင်ခွင့် ရမည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။
နှင်းခူဆိုတာ အရေပြား ရောင်ရမ်းတဲ့ အခြေနေတစ်ရပ်ပါ။
လက္ခဏာအနေနဲ့ အရေပြားနီးမြန်းတာ ၊ရောင်တာ ၊ ယားတာ ၊ ခြောက်တာနဲ့ အဖက်တွေလန်တာတို့ ဖြစ်တတ်သလို ပြင်းထန်တဲ့ ပိုးဝင်မှုကြောင့် အရည်ကြည် စိမ့်ထွက်တာနဲ့ သွေးထွက်တာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ နှင်းခူ ဖြစ်ရင် သက်သာစေဖို့ အိမ်တွင်း ကုသနည်းတစ်မျိုးကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်။
၁။ ဂျုံမှုန့်သုံးပြီး ရေချိုးပါ ။
နှင်းခူကြောင့် ယားယံနေရင် ဂျုံမှုန့်အကြမ်းကိုသုံးပြီး ရေချိုးလိုက်ပါ။
အရေပြားရောင်ရမ်းမှုနဲ့ ယာယံမှုကို သက်သာစေပါတယ်။
ဂျုံမှုန့်ထည့်ထားတဲ့ ရေနဲ့ ချိုးတာကြောင့် အယားပြေစေရုံမက အရေးပြားကို စိုပြေစေပါတယ် ။
၂။ ပင်လယ်ဆားဖြင့် ရေချိုးပါ ။
ပင်လယ်ဆားဟာ အကောင်းဆုံးအရေပြား ကြေး(ဂျီး)ချွတ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါ။
အရေပြား ဆဲလ်သေတွေကို ကင်းကွာစေရုံမက အရေပြားဆဲလ်တွေကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ပင်လယ်ဆားမှာပါတဲ့ မရှိမဖြစ် သတ္တုဓာတ်တွေက အရေပြား ရောင်ရမ်းမှုကိုကျစေပြီး စိုပြေစေပါတယ်။
သုံးရမယ့် နည်းက ပင်လယ်ဆားနဲ့ ရေကိုရောပြီး နှင်းခူနာကိုလိမ်းပေးရမှာပါ။
၃။ သံလွင်ဆီ သုံးပါ ။
ဗီတာမင်အီး များစွာပါဝင်တဲ့ သံလွင်ဆီဟာ နှင်းခူလက္ခဏာကို သက်သာစေပြီး ၊ အစိုဓာတ်ကိုပြန်ထိန်းပေးကာ အရေပြား ခြောက်သွေ့ တာနဲ့ အက်ကွဲတာကို သက်သာစေပါတယ် ။
ရေချိုးပြီးချိန်မှာ သံလွင်ဆီကို နှင်းခူနာပေါ်ချက်ချင်းလိမ်းပေးရမှာ
၄။ လက်ဖက်ဆီကို လိမ်းပါ ။
လက်ဖက်ဆီမှာ တာပင်နွိုက်ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြားရောင်ရမ်းမှုနဲ့
ယားယံမှုကို အမြန်သက်သာစေပါတယ် ။ ကြိတ်ခြေထားတဲ့ လက်ဖက်ရွက်ကိုလဲ လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ် ။
၅။ နှမ်းကြတ်စေ့ဆီကို သုံးပါ ။
နှမ်းကြတ်စေ့ဆီမှာ အိုမီဂါ ၃ဖက်တီး အက်စစ်များစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေပြီး အရေပြားကို ကျန်းမာစိုပြေပါတယ် ။
(နှင်းခူနာ ရှိသူတိုင်း အမြန်သက်သာပျောက်ကင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ...။)
ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးဝင် ဆေးမြီးတိုများ
I'm onaleave.
I couldn't take time off.
I'm too, me too.
Well,I'm all right.
I have no right to tell that.
You're not upset with me.
Can't I do anything for you?
တရုတ်နိုင်ငံသား နှစ်ဦးသည် ကျပ်သိန်းနှစ်ရာတန်ဖိုးရှိ စိန်နှစ်ပွင့်အား ခိုးယူမှုတစ်ခု နိုဝင်ဘာ၂၂ရက် နံနက် ၁၁ နာရီအချိန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှုးရုံးမှသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးရှိ နေလ၀န်း ရတနာပစ္စည်းဆိုတွင် မသင်းပွင့်လှိုင်နှင့် မသိမ့်သိမ့်ဇွန်တို့မှ ဆိုင်ခင်းကျင်း ရောင်းချနေစဉ် တရုတ် လူမျိုးအမျိုးသား နှစ်ဦးတို့မှ အဆိုပါစိန်နှစ်ပွင့်အား ၀ယ်ယူရန် ဈေးမေးကြည့်ရှုနေကြပြီး ဈေးမတည့်သဖြင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦး မှာ ပြန်သွားခဲ့ကြောင်း ထို့နောက်တွင် စိန်အလွတ်နှစ်ပွင့်ထည့်ထားသည့်ဘူးအား ဖွင့်ကြည့်ရာ မတွေ့တော့သဖြင့် ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒေါ်မိုးမိုးမှ ပန်းပဲတန်းရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း ၎င်းရုံးမှသိရသည်။
အမှုအား ပန်းပဲတန်းမမစ(ပ) ၃၈၁/၁၃ ပြစ်မှုပုဒ်မ- ၃၈၀ဖြင့်
အမှုဖွင့်ပြီး၊ အမှုစစ်ဒုရဲအုပ်နှင့် စစမရဲအုပ်တို့အဖွဲ့သည်
မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်သို့ သွားရောက်စုံစမ်းဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၎င်းတို
့နှစ်ဦးအား မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ် လေကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးတွင်
တွေ့ရှိရပြီး Mr.lou Xian Chun ၏ ပိုက်ဆံအိတ်အတွင်းမှ စိန်နှစ်ပွင့်အား ပြန်လည်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါအမှုအား ခိုးမှုအတိုင်းဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပြီး သံရုံးနှင့်ဆက်သွယ်ကာ ၎င်းတို့၏နိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင် အရေးယူစေမည်ဖြစ်ကြောင်း စခန်းမှူးက ပြောကြားသည်။
ကန်ဇွန်းဥဟာ အာဟာရပေါကြွယ်ဝတယ်။ ဗီတာမင် စီ နှင့် အေ ပိုများတယ်။
အမြဲတမ်းစားပေးရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာစေပြီး အသက်ရှည်စေတယ် ။
ကန်ဇွန်းဥမှာ ဖိုင်ဘာအမျှင်များပြားစွာ ပါဝင်လို့ အစာအိမ်နှင့် အူအတွင်း
ရွေ့ လျားမှုကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့အတွက် ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတယ်။
လိပ်ခေါင်းရောဂါ နှင့် စအိုကွဲနာတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
အူမကြီးကင်ဆာ နဲ့ စအိုပြွန်ကင်ဆာရောဂါတို့ကို ကာကွယ်ပေးရာမှာ အကျိုးပြုတယ်။
အနောက်နိုင်ငံ သုတေသနပြုချက်အရ ဟော်မုန်းအတုလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ ဓာတ်တွေပါဝင်လို့ ရင်သားကင်ဆာ နဲ့ အူမကြီးကင်ဆာတို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုပါတယ်။ထို့ပြင် ဝတဲ့လူတွေ အဆီချဖို့ ကန်ဇွန်းဥကိုစားသုံးနိုင်ပါတယ်။အရိုးအဆစ်များ ၊ သွေးကြောများဝန်းကျင်မှာ ဒုက္ခပေးတဲ့ ရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ် ။
ကန်ဇွန်းဥကို ပူနွေးစဉ် စားသုံးသင့်ပါတယ် ။စားတဲ့နေရာမှာလဲ ဆီနဲ့တို့စားသင့်ပါတယ် ။ကန်ဇွန်းဥမှာပါတဲ့ ဓာတ်အချို့ ဟာ ဆီမှာ ပျော်လွယ်ပြီး အစာအိမ်က စုပ်ယူမှု အားကောင်းစေလို့ဖြစ်ပါတယ် ။
အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်သူတွေကတော့ ကန်ဇွန်းဥက အစာအိမ်ထဲမှာ အက်စစ်လို ဖြစ်ပေါ်စေလို့ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ် ။ကန်ဇွန်းဥအခွံမှာ အမည်းစက် ပွင့်နေရင် ၊ အညှောင့်ပေါက်နေရင် မစားသင့်ပါ ။
ကပ္ပလီပ်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်း မလေးရေလက်ကြားအတွင်းတွင် မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခု စဖြစ်နေပါပြီ။
(၂၂-၁၁-၂၀၁၃)ရက်နေ့မှာ ရေစကြိုမှာ စာပေဟောပြောဖို့ရောက်နေပါတယ်။ တစ်ရက်လွတ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မသွားခင်ကတည်းက မုန်တိုင်း ဖြစ်တော့မယ် ဆိုတာကိုတော့ သတိထားမိနေပါတယ်။
(၁) ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် တောင်ပိုင်း မလေးရေလက်ကြားအတွင်းတွင် မုန်တိုင်းငယ် တစ်ခု စဖြစ်နေပါပြီ။ အားလုံးသော မိုးလေ၀သဂြိုဟ်တုတွေက မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခု လို့ ဖေါ်ပြနေကြပါပြီ။ အနောက်မြောက်ယွန်းယွန်းကိုဘဲ ရွေ့ပါလိမ့်မယ်။
(၂) (28-33) knots လေတိုက်ရင် မုန်တိုင်းငယ်လို့သတ်မှတ်တာကြောင့်
အခုမုန်တိုင်းငယ်အဆင့် စရောက်နေပါပြီ ။
Tropical Cyclone Formation Alert- Depression
Time: 0600 UTC(12:30 MST)
Position: Near 6.1°N. 99/1 °E
Movement: West at 8 knots
Maximum sustained winds: 25-30 knots
(၃) ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မွန် နဲက တနင်္သာရီတိုင်းတို့တွင်တိမ်များ ခပ်ပါးပါး ဖုံးအုပ်နေ ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ လက်ရှိနေရာဟာတောင်ဖက်ကျနေပါတယ်။ နောက်ပိုငးမှာ အရေးကြီးလာနှိုင်တာမို့ နှိုးဆော်ခြင်းအဆင့်(ALERT LEVEL) သတ်မှတ်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရက ကတိပေးထားသည့် အချိန်ထက် အမြဲနောက်ကျနေမှုမှာ နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီများဘက်မှ ကြည့်ပါက စိတ်ပျက်ဖွယ်ကိစ္စ ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းပြည် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် သက်ဆိုင်သဖြင့် ကတိကို အလွယ်မပေးဘဲ ပေးပြီးလျှင်လည်း ကတိအတိုင်း လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း အိုင်တီပညာရှင်များက ထောက်ပြကြသည်။
သန် လျင် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားထံ မှတစ်ထောင်တန်ငွေစက္ကူအတုများတွေ့ရှိခဲ့သည့်အမှုကို စီ အိုင်ဒီမှ ကိုင်တွယ်စစ်ဆေးနေ ကြောင်း သိရသည်။ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီမောင်း သူ သန်လျင်မြို့နယ် ဘုရားကုန်း ကျေးရွာ တွင် နေထိုင်သည့် ဦးလှကျော်သည် ဆိုင်ကယ်ငှားသူတစ် ဦးထံမှ တစ်ထောင်တန်ရှစ်ရွက် ရရှိပြီးနောက် အဆိုပါတစ်ထောင် တန်တချို့ကိုကြည့်ရှုရာ နံပါတ် အက္ခရာတချို့မှာ တူညီနေကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် သန်လျင်မြို့နယ် ဘုရားကုန်း ကျေး ရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးသို့အကြောင်းကြားခဲ့ သောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာတာ ဝန်ရှိသူများရှေ့မှောက်တွင် တစ်ထောင်တန်များကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာ အက္ခရာနှင့် နံပါတ်တူ တစ်ထောင် တန်ရှစ်ရွက်ကိုတွေ့ရှိသောကြောင့် ဆက်လက်စစ်ဆေးပြီး ဆိုင်ကယ် ငှားစီးသူ အောင်ဇော်ဇော်နေအိမ် သို့သွားရောက်ရှာဖွေရာ ငွေစက္ကူ အတုများမတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။
နိုဝင်ဘာ၁၉ရက်က ဖြစ်ပွား ခဲ့သော ယင်းငွေစက္ကူအတုကိစ္စ ကို ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်ပေါက်စေရန်အ တွက် အင်းစိန်စီအိုင်ဒီမှကိုင်တွယ် နေကြောင်း စီအိုင်ဒီမှအဆင့်မြင့် အရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။ ယင်းက ''လောလောဆယ် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ မောင်းတဲ့ သူနဲ့ ငှားစီးတဲ့သူတွေကို စစ်ဆေးနေ တယ်။ တရားခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကွင်းဆက်တွေ ဆက်လက်ရှာဖွေ နေပါတယ်''ဟုပြောသည်။ သန်လျင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ် ရေးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ''အရင်ဆုံးတာဝန်ရှိသူတွေကို စ စစ်ဆေးတာ။ ဆိုင်ကယ် ငှားစီး တဲ့သူအိမ်မှာလဲ ရဲတွေနဲ့ ရှာတာ ဘာမှမတွေ့ဘူး။ စီအိုင်ဒီကကိုင် ပြီဆိုတော့ အမှုမှန်ပေါ်မှာပါ''ဟု ပြောသည်။
တ​ရုတ်​နိုင်​ငံ​မှာ ​ရေ​နံ​ပိုက်​လိုင်း ​ပေါက်​ကွဲ​မှု​ကြောင့် ​လူ ၃၅ ​ဦး ​သေ​ဆုံး ၁၆၆ ​ဦး ​ဒဏ်​ရာ​ရ
​တ​ရုတ်​နိုင်​ငံ ​အေ​ရှ့​ပိုင်း ​ရေ​နံ​ဆိပ်​ကမ်း​မြို့​ဖြစ်​တဲ့ ​ကွင်း​ဒေါင့် (Qingdao)​မြို့​မှာ ​နိုင်​ငံ​ပိုင် ​ရေ​နံ​ကု​မ္ပ​ဏီ​ကြီး​ဖြစ်​တဲ့ ​ဆိုင်​နို​ပက်​ရေ​နံ​ကော်​ပို​ရေး​ရှင်း (Sinopec)​ရဲ့ ​ရေ​နံ​ပိုက်​လိုင်း ​ပေါက်​ကွဲ​မှု​တ​ခု ​ပြီး​ခဲ့​တဲ့ ​နိုဝင်​ဘာ ၂၂ ​ရက် ​သော​ကြာ​နေ့​က ​ဖြစ်​ပွား​ခဲ့​ပါ​တယ်။
မြေ​အောက်​ပိုက်​လိုင်း ​ပေါက်​ကွဲ​ပြီး ​အ​ပေါ်​မှာ​ရှိ​တဲ့ ​လမ်း​မ​အ​ထိ ​ပေါက်​ထွက်​ခဲ့​တာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​ဆီ​ယို​စိမ့်​ပေါက်​က​နေ ​မီး​လောင်​ကျွမ်း​ပြီး ​ပေါက်​ကွဲ​မှု ​ဖြစ်​ခဲ့​တယ်​လို့ ​ဆို​ပါ​တယ်။
​နံ​နက် ၁၀ ​နာ​ရီ​ခွဲ​မှာ ​ပေါက်​ကွဲ​မှု ​ဖြစ်​ခဲ့​ပြီး ​ည ၁ ​နာ​ရီ​ကျ​မှ ​မီး​ငြိမ်း​သတ်​နိုင်​ခဲ့​တယ်​လို့ ​ဒေ​သ ​အာ​ဏာ​ပိုင်​တွေ ​က ​ဆို​ပါ​တယ်။
​နိုင်​ငံ​ပိုင်​သ​တင်း​ဌာ​န ​စီ​စီ​တီ​ဗွီ​က​တော့ ​လူ ၃၅ ​ယောက် ​သေ​ဆုံး​ပြီး ၁၆၆ ​ယောက် ​ဒဏ်​ရာ​ရ​ခဲ့​တယ်​လို့ ​ဆို​ပါ​တယ်။
​ကွင်း​ဒေါင့်​မြို့​မှာ ​ရှိ​တဲ့ ​ဆီ​သို​လှောင်​ကန်​ကြီး​ဟာ ​တ​ရုတ်​နိုင်​ငံ​ရဲ့ ​အ​ကြီး​ဆုံး ​ဆီ​သို​လှောင် ​ကန်​တွေ​ထဲ​က ​တ​ခု​ဖြစ်​ပြီး ​အ​နည်း​ဆုံး ​အ​ကြီး​စား​ရေ​နံ​ချက်​စက်​ရုံ ၂ ​ခု​ကို ​ရေ​နံ​စိမ်း​တွေ ​တင်​ပို့ ​ပေး​နေ​တာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
​ဒီ​ပေါက်​ကွဲ​မှု​နဲ့ ​ပတ်​သက်​ပြီး ​ဆိုင်​နို​ပက်​ဘက်​က ​တုန့်​ပြန်​မှု​တွေ ​မ​ရှိ​သေး​ပါ​ဘူး​။
​တ​နေ့​ကို ​ဆီ​ပေ​ပါ ၂ ​သိန်း ၄ ​သောင်း ​ထုတ်​လုပ်​နေ​တဲ့ ​ဆိုင်​နို​ပက် ​ကွင်း​ဒေါင့်​ ​ရေ​နံ​ချက်​စက်​ရုံ​ရဲ့ ​ရေ​နံ​ထုတ်​လုပ်​မှု ​ကို ​ထိ​ခိုက်​မှု ​ရှိ၊ ​မ​ရှိ​ကို​လည်း ​မ​သိ​ရ​သေး​ပါ​ဘူး​။
ရခိုင်ပြည်နယ် မူလတန်းကျောင်းများ အတွက် ဂျပန် အလှူရှင် တစ်ဦး ကန်ဒေါ်လာ ငါးသောင်း ကူညီ
ကျောင်းမရှိ၍ ဘုန်းကြီးကျောင်းအောက် စပါးတောင်း ဆရာနှင့် စာသင်ကြားနေရသော ရခိုင်မှ ကလေးငယ်များ ( ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ မူလတန်းကျောင်းများ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရန် အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ အလှူရှင် တစ်ဦးက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးသောင်း ကူညီလှူဒါန်းလိုက်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
၎င်းအလှူငွေအား ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့နေ အလှူရှင် Mr.IKKA AKINARI ကိုယ်စား Mr.HAN JAEHTEOH က သပိတ်အိုင် သီတဂူဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင် ဥာဏိဿရမှ တဆင့် နိုဝင်္ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က လှူဒါန်းလိုက်ကြောင်း နိုဝင်္ဘာလ ၂၂ ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြသည်။
အခမ်းအနားတွင် အလှူရှင် ကိုယ်စား MR. HAN JAEHYEON က မြန်မာနိုင်ငံသည် အလွန် နှစ်သက်စရာ ကောင်းပြီး မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ရိုးသားဖြူစင်ကြသဖြင့် ကလေးငယ်များ မူလတန်း ပညာရေး အဆင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ရည်ရွယ်၍ လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတစ်ခုကို တည်ထောင် ရာတွင် ကလေးငယ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည် အရေးပါအရာရောက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကလေးငယ်များ ပညာရည်မြင့်မားမှ တိုင်းပြည်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်ဟု သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့တော် စစ်တွေမှ ခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးကို တွေ့ရစဉ်။ ( ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
သီတဂူဆရာတော်ကြီးအား အကူအညီနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ရန် အတွက် နိရဉ္စရာက အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်သော်လည်း ဖုံးပိတ်ထားသည်ဟု အကြောင်းပြန်ပြီး ဆက်သွယ်၍ မရရှိခဲ့ပါ။
၎င်း အလှူရှင် Mr.IKKA AKINARI ယခင်ကလည်း စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပင်လယ်ဘူးဒေသရှိ မူလတန်းကျောင်း အတွက် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ နှင့် ဆေးရုံအတွက် ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံရေးမှာ အမြဲတမ်းရန်သူ မရှိဘူးဆိုတဲ့ စကား ကြားဖူးတယ်။ ဒီမနက်တော့ စီးပွားရေးမှာလည်း အဲသလိုပဲ အမြဲတမ်းရန်သူမရှိသင့်ဘူး ဆိုတဲ့သဘော ဆင်ခြင်မိပါတယ်။
ရန်ကုန် ၄၆ လမ်း စာနယ်ဇင်းဈေးကွက်ထဲက ဖြန့်ချိရေးဆိုင်တခုမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း ပိုစတာကြီးတွေ ချိန်ဆွဲထားတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
သူရိယနေဝန်းဂျာနယ်ကို မဖြန့်ဘူး မရောင်းဘူး ဆိုတဲ့ ပိုစတာတွေပါ။ အဲဒီဂျာနယ်က ပြဿနာဂျာနယ်လို့လည်း ဆိုထားတာပါ။
ဘာကြောင့် အဲဒီလို ကြေညာရတာလဲ၊ အငြင်းပွားဖွယ်ဂျာနယ် ဖြစ်နေတာကြောင့်လား၊ ဆိုင်ရှင်ကို မေးကြည့်ပါတယ်။
အဖြေကတော့ ... ဂျာနယ်က သူတို့ဆီကို မှာထားသလောက် မရောက်ဘူး၊ တချို့ဆိုင်တွေကိုတော့ ရောက်တယ်၊ ဒါကြောင့် ဖြန့်ချိရေး လုပ်ကိုင်ရာမှာ အခက်အခဲ ရှိတယ်၊ ပြဿနာတက်တယ် လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
ဈေးကွက်က အပြိုင်အဆိုင်သဘော ဖြစ်တာကြောင့် မှာထားသလောက် လာမပေးရင်ပြဿနာ တက်ပြီပေါ့၊ ဒီတော့ အဲသလို ကြေညာတာဟာ သဘာဝကျပါတယ်လေ လို့ တွေးမိပါတယ်။ ဧရာဝတီဘလော့မှာ ရေးဖို့ မေးခဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ ... အဲဒီနေရာ ဒီကနေ့ စနေမနက် ရောက်တော့ ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲဖြစ်နေပါပြီ။
ဟိုနေ့က ပြဿနာ .... ဆိုတဲ့ ပိုစတာများနေရာမှာ - စနေနေ့ထုတ် သူရိယနေဝန်းကို ကျပ် ၅ဝဝ နဲ့ အားပေးဝယ်ယူနိုင်ပြီလို့ ရေးထားတဲ့ ပိုစတာတွေက အစားထိုး နေရာယူနေပါတယ်။
အင်း...ဂျာနယ်တိုက် နဲ့ ဖြန့်ချိရေးဆိုင်တခုကြားမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာလိုက်နိုင်ပြီလို့ တွေးလိုက်မိပါတယ်။
ဒေါသသင့် ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့အခြေအနေကနေ ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့သင့်မြတ်ရေးအခြေအနေကို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲနိုင်ပါလားလို့လည်းတွေးမိပါတယ်။
စီးပွားရေးမှာ အမြဲတမ်းရန်သူမရှိဘူးလို့လည်း ဆိုနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီဂျာနယ်က ဟိုတလောကပဲ ၆၀၀/၇၀၀ နဲ့ ရောင်းနေတဲ့ ဂျာနယ်ပါ။ သူတပါးဂျာနယ်များထက် ၁၀၀/၂၀၀ ပိုတဲ့ ဂျာနယ်ပါ။
ရန်ကုန်မှာ ခုချိန်ထိလည်း အရောင်းသွက်နေပါတယ်။ ဈေးကတော့ ၅၀၀ ရောင်းတဲ့နေရာ ရှိသလို ၆၀၀ ရောင်းတဲ့နေရာ ရှိပါတယ်။
သူ ပစ်မှတ်ထားတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ် ဘာကိုစိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုတာလည်း သဘောပေါက်ပုံရပါတယ်။
အွန်လိုင်းပရိသတ်အတွက်တော့ ဒီဂျာနယ်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ သိပ်မရှိပါ။ ဂျာနယ်မှာ ခပ်ကြီးကြီးထည့်ထားတဲ့ပုံတွေကို အွန်လိုင်းမှာ မကြာခဏဆိုသလို မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်လို့ပါ။
အွန်လိုင်းမသုံးတဲ့ပရိသတ်ကတော့ ဒီဂျာနယ်ကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ရေး သမ္မတ၊ လွှတ်တော်နှင့် တပ်မတော်တို့ တွေ့ဆုံကြရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ထံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မေတ္တာရပ်ခံစာ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသည် နိုင်ငံတွင် အဓိက အကျဆုံးသော ကိစ္စရပ်တခုဖြစ်
ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် သမ္မတ၊ လွှတ်တော်နှင့် တပ်မတော်တို့ တွေ့ဆုံ
ဆွေးနွေးရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား စာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံရန် ယနေ့ အစည်း အဝေးက ဆုံးဖြတ်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။